Oh my, taasi ciyaarta yar macaan helay halkii xiiso leh, waayadan dambe! Waa maxay calool adag ujeedooyinku horumarinta King leeyihiin dukaanka Waayo, kuwaas oo xayawaanka nasiib darro saboolka ah ee soo socota? heerka 59 waa heer raadinaya aan waxba galabsan, xayawaanka dhab ahaan u hesho fasax on this mid ka mid ah sida aad ujeedadoodu ay tahay in ay nadiifiso 85% ee blocks iyo kasban 15 000 dhibcood, waxa aad u tidhaahdaan? codadka fudud…haa ay fududahay…si fudud heerka ugu adag ee weli!
Sidaas waxa aannu ku samayn? iyo sidoo kale wax iska cad waa in ay qaataan ounce kasta oo nasiib aad u tuujin karaa oo ah isku day kasta oo ay maamulaan waxaa la! Horseednimo Waxaad doonaysaa in la abuuro isku weyn, iyo halka ay tani u muuqataa fiican oo fudud xaqiiqadu waxa ay tahay aad ma doonayo in la siiyo isku weyn. Dhab ahaantii xaddiga isku laydiin siiyo oo dhan waa quruxsan naxdin leh. Isku day kasta oo aan sameeyey (iyo wiil waxaa jiray kuwo badan!) marnaba keentay in firecracker hal la soo saaray, aad u niyad!
Laakiin waa afterall suurto gal, kaliya aad u leeyihiin in ay rajeynayaan meesha blocks ku dhici doonaa oo si taxadar leh loo qorsheeyo aad weerar sidan. Mid ka mid ah aad handy tip is that you can make combinations above diamonds before they smash. Sidaas darteed haddii aad si kooban u arko isku-dar ah in uu socon doono ilaa sanduuqa UMSW diamond iyo waxa ay ku dhufan doonto dhulka ka dibna si walba waxaa ku dhuftay ka hor inta ay taasi dhacdo.
Isku day inaad ogaado waxa ugu fiican kuu shaqeeya, kulan qaar ka mid ah ayaan u imid anigoo dhow ka shaqeeya kor ilaa hoos ah iyo kuwa kale oo dhakhso ka hooseysa ayaa kor u baxay, laakiin fure u yahay sida aad arki fudud…oh Oo miyaan xuso nasiib? (*oh iyo aad leedahay labo ka mid ah Waxuun firaaqada hadhay ka freebies aad la siiyey bilowga tan kaliya waxaa laga yaabaa in heerka si ay u crack soo baxay!)
Waxa ugu wareerka badan oo ku saabsan heerka this waa in ay u egtahay si fudud! waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in Talo blocks soo biiray ilaa marka ay ku dhacay hooseysa, dhab ahaantii taasi cadeeyay inuu yahay qayb ka mid ah oo aad u qiimo badan oo aan guul! ~ Nasiib wacan!
Filed Under: heerka 59 Tagged: adag, heerka 59